Mitambo Magirazi ekumhanyisa, bhasikoro uye kushushi - THE INDIAN FACE
PERFORMANCE: KUBUDIRIRA KWENYIKA
Uller® ndiyo yedu yepamusoro yakakwira-performance brand yakagadzirwa nevatambi vepamusoro. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa pasi pechiitiko chevamhanyi-vanomhanya vatambi vanoisa pamuviri izvo zvavanoda mune zvigadzirwa zvedu uye izvi zvinogadzirwa kuzadzisa zvese zvinodiwa. Zvigadzirwa zvinoyedzwa zvichivatora kuenda padanho repamusoro rekushushikana kuti vaone kuti vachazadzisa zvinotarisirwa panguva yekushandisa kwavo mune zvehunyanzvi uye zvemitambo mitambo
Clarion Bhuruu / Tsvuku
Clarion Bhuruu / Tsvuku 140.00 €
Clarion Nhema / Bhuruu
Clarion Nhema / Bhuruu 83.99 € 140.00 €
Clarion Chena / Tsvuku
Clarion Chena / Tsvuku 140.00 €
Clarion Nhema / Nhema
Clarion Nhema / Nhema 140.00 €
Clarion Yero / Bhuruu
Clarion Yero / Bhuruu 140.00 €
Volcano Tsvuku / Bhuruu
Volcano Tsvuku / Bhuruu 71.99 € 120.00 €
Volcano Nhema / Mirror
Volcano Nhema / Mirror 120.00 €
Volcano Dema / Bhuruu
Volcano Dema / Bhuruu 120.00 €
Volcano Chena / Mirror
Volcano Chena / Mirror 120.00 €
Volcano Bhuruu / Dema
Volcano Bhuruu / Dema 120.00 €
Kutinhira Nhema / Tsvuku
Kutinhira Nhema / Tsvuku 160.00 €
Kutinhira Kuchena / Bhuruu
Kutinhira Kuchena / Bhuruu 160.00 €
Kutinhira Grey / Girini
Kutinhira Grey / Girini 160.00 €
Kutinhira Nhema / Girinhi
Kutinhira Nhema / Girinhi 160.00 €
Kutinhira Bhuruu / Mirror
Kutinhira Bhuruu / Mirror 95.99 € 160.00 €
Bolt Dzvuku / Black
Bolt Dzvuku / Black 185.00 €
Bolt Tsvuku / Bhuruu
Bolt Tsvuku / Bhuruu 185.00 €
Bolt Tsvuku / girazi
Bolt Tsvuku / girazi 110.99 € 185.00 €
Bolt Yero / Chinangwa
Bolt Yero / Chinangwa 185.00 €
Kutenderera uye kumhanya SPORTS GOGGLE KWEVARUME NEVAKADZI
MITAMBO SUNGLASSES KWEVARUME NEVAKADZI
The Indian Face® chiratidzo cheSpanish chezvemitambo zvishongedzo uye yemafashoni yemafashoni yakavambwa muna2006, ine makore anopfuura gumi neshanu eruzivo ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune ino chikamu Nhasi, mhando yedu inodada kuve chikamu che Indicom Brands, kambani inobatanidza pamwechete akati wandei emhando, kusanganisira Uller®, iro rakanyanya tekiniki chiratidzo cheboka.
Sekambani, isu tinogadzira dhizaini, kugadzira uye kugovera enisex magirazi emitambo uye zvemitambo-zvakajairwa zvishongedzo zvevarume nevakadzi vane basa repamusoro, rakanyanya kugadzirirwa hunyanzvi kana semi-hunyanzvi tsika yemitambo yakasiyana, inoitwa zvese munzvimbo. madhorobha, semuenzaniso kumhanya kana kuchovha bhasikoro, uyezve mitambo yemitambo, yakadai sekusvetuka, kuchovha bhasikoro, MTB, kumhanya, kumhanyisa mhepo uye zvimwe zvakawanda zvinoitwa kunze. Neichi chikonzero, pa www.theindianface.com iwe unowana akasiyana akasiyana siyana emitambo magirazi magirazi emhando yepamusoro, akagadzirwa nevatambi vevatambi.
Ziva kuti zvese zvehunyanzvi magadzirirwo emitambo yedu yegirazi magirazi anowanikwa murondedzero yemhando yega yega yemhando. Nekudaro, isu tinogona kukuudza kuti edu ese maunganidzwa emitambo magirazi ari ePrimiyamu, uye kuti isu tine akawanda mamodheru ane mavara akasiyana uye dhizaini, kusanganisira magirazi emugwagwa, nzira kana mugomo kuchovha, magirazi echikepe, anomhanya magirazi uye zvakare magirazi emumugwagwa anomhanya, zvinoenderana nekuwanikwa kwega kwega muunganidzwa mudura redu.
Mamiriro edu egirazi emitambo ari sei?
Isu tinoziva nezvekukosha kwekupfeka magirazi ezuva patinosangana nezuva. Nechikonzero ichi, kuunganidzwa kwedu kwemagirazi emitambo kunoitwa nezvinhu zvinodzivirira zvemhando yepamusoro, izvo zvinopa dziviriro yakanyanya uye nyaradzo panguva yemitambo. Saizvozvo, malenzi avo ane tekinoroji X-Polar nedudziro yepamusoro UV-400 dziviriro. Naizvozvo, ese maunganidzwa edu emitambo magirazi ezuva evarume nevakadzi anowanikwa pa www.theindianface.com Ivo vanopa risingakundike optics kuyambuka iyo yakazara spectrum yechiedza. Aya magirazi emabhasikoro kana anomhanya magirazi, sezvazvingaite, kuvandudza maonero ako ekusiyanisa uye neruvara. Nenzira iyi, edu ese magirazi emitambo, kusanganisira iwo akaunganidzwa emushonga uye asiri-ekuraira mabhasikoro magirazi, ane akanakisa tekinoroji mumalensi avo uye yakanyanya UV-400 kudzivirira.
Mimwe yedu yemagirazi emitambo inounganidzwa inosanganisira mamodheru anogona kuchinjika, akagadzirirwa kuzadzikisa zvido zvevatambi vane mamiriro eziso, uye vanoda magirazi ekugadzirisa kuita mitambo. Aya mamodheru emitambo magirazi emitambo ane nzvimbo kana chidimbu chidiki mufuremu yavo yekuisa lens yekugadzirisa, kana zvichidikanwa. Kana iwe ukatenga chero yemhando dzekunyorerwa magirazi emitambo anowanikwa muchitoro chedu chepamhepo, unofanira kuenda nawo kuna chiremba wako wemaziso kuti akwanise kugadzirisa malenzi ekugadzirisa zvinoenderana neziso rako remaziso. Aya malenzi anofanirwa kuiswa mune iyo clip inowanikwa pane furemu yemishonga yako yemagirazi emitambo. Magirazi emitambo anochinjika aunowana pane webhusaiti yedu, semuenzaniso, edu emhando yemagirazi emabhasikoro, ari pasi pekuwanikwa kwesitoko yedu. Kana iwe uchida kutenga mamodheru ane hunhu, iwe unofanirwa kuve nechokwadi nezvazvo nekutarisa kurondedzero yemhando imwe neimwe yemitambo magirazi emitambo kunyanya.
Chii chinosanganisira magirazi edu emitambo?
Yedu yemitambo magirazi egirazi emitambo anosanganisira:
Chimiro chakagadzirwa nezvinhu zvekushomeka zvakanyanya uye kureruka ine unisex dhizaini, ndosaka ichigadzirisa kune ese evarume nevakadzi zvinonaka. Nekudaro, isu tine mamodheru emitambo magirazi evarume uye zvakare mamodheru emitambo magirazi evakadzi.
Girazi nehunyanzvi X-POLAR tsananguro yepamusoro uye UV-400 KAT kudzivirirwa. 3.
Yedu mamodheru emitambo magirazi ane inochinjika magirazi anosanganisira yekuwedzera yechipiri lens CAT1, kwemazuva mashoma mwenje.
Mirayiridzo uye garandi chitupa.
KUSANGANISWA KWAKAgadzirirwa DZEMITAMBO
Tsvaga yedu yemhando yemagirazi evaichovha mabhasikoro.
Isu takagadzira akasiyana siyana akagadzirwa magirazi emitambo kuti apfuure uye apfuure zvinotarisirwa nevehunyanzvi, semi-nyanzvi uye amateur mabhasikoro. Naizvozvo, mazhinji eunganidzwa edu anosanganisira mamodhibhodhi uye asinganyorerwi magirazi emabhasikoro, uye mamodheru emigwagwa, nzira kana magirazi emabhasikoro, kuitira nyaradzo yevanoda mabhasikoro, kunyangwe avo vanofanirwa kuzvishandura maererano nemamiriro avo ophthalmological.
Iwo ePrimiyamu mabhasikoro emagirazi emhando anowanikwa pane webhusaiti yedu ane akanyanya kuita pamusika. Izvo zvinogadzirwa nemishonga inodzivirira uye yakakwira tsanangudzo lenzi, iyo inopa nyaradzo uye chengetedzo kumutambi panguva yebhasikoro. Muchokwadi, mazhinji edu magirazi emabhasikoro anosanganisira iyo yechipiri lens yakanangana nemazuva akapenya zvishoma. Uye zvakare, edu akaunganidzwa magirazi emabhasikoro, evarume nevakadzi, anowanikwa mune akasiyana saizi, mavara uye dhizaini. Imwe neimwe yadzo ine UV-400 dziviriro uye inobatsira kuvandudza musiyano wevaravara panguva yemabhasikoro zvese munzvimbo dzemadhorobha uye munzvimbo dzepanyama. Kunyanya, edu mamodheru emigwagwa mabhasikoro magirazi akakodzera kune ese maviri marudzi enzvimbo. Iyi modhi inoratidzirwa kune iko kuita kwegomo uye nzira yemabhasikoro, kana kunyangwe kutenderera kwekushanya kwekushanya.
Tsvaga yedu yemhando yemagirazi evamhanyi.
Tinopa magirazi emitambo akanakisa ekumhanya pamusika, sezvakataurwa nevatinoshanda navo, vatengi uye vamiriri vemitambo. Imwe neimwe yemhando yedu yemagirazi anomhanya akaedzwa nevatambi vehunyanzvi, avo mhinduro inotibatsira kugadzirisa kunodiwa kuti tipe magirazi anomhanya emhando yepamusoro, uye maficha anobatsira zvechokwadi vamhanyi kuti vave nerinani performance.
Mhando dzedu dzemagirazi ekumhanya dzinoshandiswa nemhando dzese dzevatambi, kunyangwe avo vasina hunyanzvi vari kuita uyu mutambo, asi vanofarira kumhanya munzvimbo dzemadhorobha kana kunze. Nekudaro, ese edu mamodheru emumhanyi magirazi akagadzirwa kune epamusoro nyanzvi uye semi-nyanzvi mumhanyi, nechinangwa chekusangana nekupfuura zvavanonyanya kukosha panguva yemitambo yekudzidzira.
Yedu magirazi egirazi mamodheru emumhanyi vanomhanya. Zvavari?
Pamusoro pezviunganidzwa zvambotaurwa, takawedzerawo mamodheru kune yedu repertoire yemagirazi emitambo, akanyatsogadzirirwa kumhanya kwemakomo uye nhangemutange yedhorobha. Kunyanya, nzira yedu inomhanya magirazi ezuva anopa dziviriro, kuramba uye kureruka kunodzivirira vatambi vekumhanya pavanoyambuka nzvimbo yakaoma uye isina kukwana yemakomo, vachitarisira nekuvandudza maonero avo.
Nenzira iyi, magirazi edu egirazi ekumhanyisa nzira anonyanya kukodzera kune Ultra marathons uye epakati, akareba uye akawedzera marefu marefu emakwikwi emakwikwi. Isu takatopfekedza mamodheru egirazi remasiraini emumugwagwa anomhanya ayo lenzi dzinochinjika dzinobvumidza iyo nzira mumhanyi kushandisa iyo nhanho inovakwanira ivo zvinoenderana nemamiriro ekunze nemamiriro akareruka.
Rangarira kuti zvigadzirwa zvedu zvese zvinoenderana nekuwanikwa kwesitoko yedu. Uye zvakare, ese akasarudzika maitiro emitambo yedu magirazi, kusanganisira edu mamodheru magirazi ekutsvedza, kumhanya, trail kumhanya uye edu mamodheru emigwagwa mabhasikoro magirazi anogona kuwanikwa mune yavo yega tsananguro. Neiyi nzira, tinokumbira vese vatengi vedu kuti vaverenge rondedzero yechinhu chimwe nechimwe chakanyatsonaka kuitira kuti vagone kusarudza zviri nyore magirazi avo matsva emitambo mu www.theindianface.com.
MITAMBO SUNGLASSES KWEVARUME
The Indian Face ane anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko ekugadzira uye nekugovera zvemitambo zvishongedzo zvevadi vemafashoni uye vekunakidzwa. Parizvino, kambani yedu chikamu cheboka Indicom Brands, iyo yakazvarwa muna2018 nekuda kwekubatanidzwa kwemhando The Indian Face® uye Uller®, chiratidzo cheboka reboka.
Pakati pezvigadzirwa zvedu uye zvishongedzo isu tinosanganisira akasiyana siyana epuriyamu magirazi emitambo, akanyatsogadzirirwa kugutsa uye kupfuura zvinodikanwa zvakanyanya zvevamhizha uye vangangoita vatambi, nehunyanzvi dhizaini uye kuita kwakanyanya kune ese marudzi emitambo zviitiko, kubva kuchovha kana kumhanya munzvimbo. mumaguta, kumitambo yakanyanyisa uye kushanya kwekunze, senge kutsvedza, kuchovha mabhasikoro, kumhanya munzira, kumhanyisa mhepo, uye zvimwe zvakawanda.
Chikamu chebasa redu ndere kupa magirazi emitambo akanakisa pamusika, evarume nevakadzi, ane unisex dhizaini uye nemhando yepamusoro. Nenzira iyi, isu tinopota tichitangisa kuunganidzwa epamusoro emhando yemagirazi emitambo evarume, akagadzirwa kunyanya kune yemahara mweya uye vadikani vechokwadi vemitambo.
Ndeapi magirazi emitambo evarume vedu akafanana uye ndeapi mabatsiro?
Magirazi edu ezvemitambo evarume ane akanyanya kuita uye mhando dzemhando dzinowanikwa pamusika, sezvakataurwa nevatinoshanda navo, vatengi nevatambi. Ese edu magirazi emitambo evarume anopa anoomarara uye akareruka mafuremu akagadzirwa nezvinhu izvo zvinopa simba uye nyaradzo panguva yemitambo. Uye zvakare, edu akaunganidzwa emitambo magirazi ezuva evarume ane malenzi ane yakanyanya UV-400 dziviriro, iyo tekinoroji inopa yakakwira tsananguro uye isingakundike musiyano. Izvo zvese nezve tekinoroji yepamusoro Performance Optics X-POLAR, iripo mune mazhinji eunganidzwa emitambo magirazi evarume anowanikwa pane webhusaiti yedu, zvinoenderana nezvinotsanangurwa uye kuwanikwa kwemhando yega yega.
Iyi tekinoroji yepamusorosoro, pamwe nehunhu hwedu hwakanakisa hwekugadzira uye zvekushandisa, uye yedu yepamusoro yekuparadzira uye yekuendesa sevhisi, ndizvo zvinonyatsotisiyanisa kubva kune mamwe ese marangi emitambo magirazi ezuva evarume aripo pamusika. Uye zvakare, isu tinoshandisa inoenderera yekuvandudza matekiniki ayo isu nguva nenguva tinovandudza zvigadzirwa zvedu zvese nemasevhisi kuti tigare pane zvinoitika, zvese mune fashoni nehunyanzvi. Nekudaro, edu ese maunganidzwa emitambo magirazi ezuva evarume anobatsira kuchengetedza uye nekuvandudza maonero enharaunda uye zororo nenzira inoshanda yekunyaradza kwakadzikama uye kudzikama kwechero nyanzvi kana semi-nyanzvi mumhanyi. Nenzira iyi, kuunganidzwa kwedu kwemagirazi ezuva emitambo, kusanganisira mamodheru egirazi rekusvetuka, kumhanya, nzira yekumhanya uye edu mamodheru emigwagwa yemabhasiketi evarume vanopa optics isingakundike mune yakazara mwenje, kusimbisa iko kuona kwekusiyana uye nemuvara, uye ichivharira kufamba kwemirairo ye ultraviolet kubva kuzuva.
Ndeapi magirazi edu emitambo evarume anosanganisira?
Mhando dzedu dzemasikati magirazi emitambo anosanganisira:
Chimiro chakagadzirwa nezvinhu zvekushomeka zvakanyanya uye kureruka.
Girazi nehunyanzvi X-POLAR tsananguro yepamusoro uye kudzivirirwa UV400 CAT.3. Yedu anochinjika magirazi mamodheru anosanganisira CAT.1 yechipiri lens.
Rangarira kuti yedu repertoire yezvigadzirwa zvemitambo nezvimwe, kusanganisira magirazi emitambo evarume, zvinoenderana nekuwanikwa kwesitoko yedu. Naizvozvo, funga kuti zvese hunhu uye zvehunyanzvi maratidziro ega ega muunganidzwa wemitambo magirazi evarume, kusanganisira edu mamodheru ekutsvedza, kumhanya, nzira yekumhanya, uyezve edu mamodheru emigwagwa yemabhasikoro emabhasiketi evarume, anogona kuwanikwa pakurondedzerwa chimwe nechimwe chigadzirwa, chinowanikwa muchikamu ichocho.
Chii chakakosha kupfeka magirazi ezuva emitambo?
Kuenda kunotamba mitambo kwakanakira hutano hwako, kunyanya kana zvikaitwa panze. Nekudaro, zvakakosha zvakanyanya kuti mumhanyi wese apfeke michina chaiyo uye inosanganisira magirazi ezvemitambo, kana kuti havazosvitse zvinangwa zvavo kana kuzvidzivirira zvakanaka kubva kuzuva nezvinhu. Izvo zvakati, imwe yenyaya dzinonyanya kunetsa vatambi mazuva ano mwaranzi yezuva, uye kuti inobata sei chiratidzo. Vamhanyi vazhinji vanonzwa imwe mhando yekudzivirira vachiita mitambo pamazuva anotonhorera uye asina chiedza, zvisinei, mwaranzi yeultraviolet inopfuura nepakati pegore ripi rinofukidza zuva, kunyangwe paine mwenje mushoma.
Ziva kuti kupfeka magirazi emitambo evarume kunodzivirira kubva kuzuva uye kunobatsira kudzivirira zvirwere zvemaziso zvakaita semakona, melanomas, uye kunyangwe kutidzivirira kubva kugomarara remaziso. Naizvozvo, kuita mitambo panze Zvinoda kuchengetedzwa kwemhando yemagirazi emitambo evarume ayo anotarisira maziso uye nekuvandudza iwo musiyano wevara. Zvisinei nemutambo waunodzidzira kunyanya, kana uri kuzviita panze uye uchionekwa nezuva, zvakanaka kuti utarisire uye uwedzere maratidziro ako nemagirazi emhando yepamusoro evarume, akadai seaya aunowana The Indian Face, iyo yakaratidza kuve yakasarudzika munzira dzese.
Magirazi edu ebhasikoro akamira sei evarume?
Parizvino, isu tine yakafara repertoire yemasiraidhi emabhasikoro evarume, akanyatsogadzirirwa maitiro anoshanda emutambo uyu. Mhando dzedu dzemagirazi emabhasikoro evarume dzinosiyana pakukura, ruvara uye chimiro, zvisinei, imwe neimwe yadzo inopa mhando yepamusoro uye yakasimba. Muchokwadi, iko kukwidziridzwa kwepamusoro kwevarume vedu mabhasikoro egirazi mamodheru akamira The Indian Face pakati pemhando dzakanakisa dzemagirazi emitambo pamusika, kunyanya kune yedu yemhando / mutengo chiyero, uyezve nezvese mabhenefiti avanopa kune vanofamba nemabhasikoro kunyanya maererano nekudzivirira uye kuoneka munzvimbo dzakasiyana.
Pasina kupokana, isu tinodada zvikuru nekupa nyanzvi uye vangangoita mabhasikoro mabhaisikopu akasiyana siyana mumagirazi evarume ekuchovha bhasikoro, zvichibva mukuwanikwa kwezvatinowana mumatura. Pakati pavo tinosanganisirawo mamwe mamodheru emabhasikoro evarume vane lensi dzinochinjika, dzinokutendera kuti ukwanise kuchinjisa girazi, uye sarudza chikamu chinodiwa nemuchovha maererano nemamiriro ekunze uye nemwenje wezuva iro, zvisinei nenzvimbo mune iwe unodzidzira kuchovha: gomo, mugwagwa, kana muguta. Mugwagwa wemurume wedu wemabhasikoro emabhasiketi kunyanya ndiwo muenzaniso wakanakisa wekuti tine magirazi emabhasikoro akakwirira kune ese ari maviri emaguta uye enharaunda nharaunda. Nechikonzero ichi, kubva pamakwikwi ebhasikoro kuenda kune anonyanya kufarira uyo anofarira kutenderera kwekuchovha bhasikoro pakupera kwevhiki, iwe unowana pakati pesarudzo dzedu dzemagirazi emabhasikoro evarume, akanyanya kumukodzera.
Magirazi edu ekumhanya akadii evarume?
Kumhanya magirazi evarume kunobva kuvakuru vedu vanotengesa zvakanyanya Padanho repasirese nepasi rose. Vatambi vazhinji vasingakwikwidzi kana vari nyanzvi mumutambo uyu kunyanya, vanonakidzwa nekudzidziswa nekumhanya munzvimbo dzemaguta muguta, uye zvakare munzvimbo dzekunze dzekunze, senge kumahombekombe kana kumakomo. Nechikonzero ichi, vese vehunyanzvi uye vepo vamwe vamhanyi vanokwanisa kuwana yakasarudzika sarudzo kwavari pakati pemakosi edu akasiyana magirazi evarume anomhanya. Muchokwadi, nguva nenguva, isu tinogadziridza mamodheru emagirazi evarume anomhanya, nechinangwa chekupa yakanakisa chigadzirwa mhando mune icho chikamu. Muchokwadi, girazi redu rese rekumhanya rakaedzwa nevamhanyi vehunyanzvi vanotipa yavo zvaunofunga uye mapoinzi ekuvandudza. Kubva pane izvi, isu tinoita inoenderana nekugadzirisa kana zvichidikanwa uye nekudaro tinowana akanakisa anomhanya magirazi evarume pamusika, pasina kupokana.
Mhando dzedu dzemagirazi ekumhanyisa evarume dzinopa simba uye nyaradzo yemitambo, nekuti inogadzirwa nemishonga inodzivirira uye yakajeka, yemhando yepamusoro. Uye zvakare, pakati pezviunganidzwa zvedu zvakasiyana, isu tinopa mamwe mamodheru ane lensi dzinochinjika kuitira kuti mumhanyi agone kutarisira kuona kwavo uye nekuona nemazvo kana vachimhanya chero nguva yezuva. Nekudaro, magirazi emurume edu mazhinji anomhanya anosanganisira malenzi maviri, rimwe remazuva ane zuva CAT.1 uye rimwe remazuva ane makore kana nguva dzechiedza chidiki, CAT. Nekudaro, iwo ruzivo rweumwe neumwe chaiwo murume anomhanya magirazi ezuva anowanikwa pane yedu webhusaiti anogara achienderana neyedu repertoire yegore iro, uye kuwanikwa kweedu stock.
Tsvaga kuunganidzwa kwedu kwezuva magirazi evarume evamhanyi
Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudza matekiniki anoshandiswa nechikwata chedu chevagadziri nevatambi, tinokudziridza kuunganidzwa kwakasarudzika emitambo magirazi emumakomo ekumhanya kana nzira yekumhanya, ese ari maviri ehunyanzvi uye semi-nyanzvi. Sezvo zvakagadzirwa nemwenje wakawedzera uye husingagumi, uye iine yakafara tsananguro lenzi, mamodheru emigwagwa anomhanya magirazi evarume anokwanisa kumira chero mamiriro anoita mutambi kuenda kana achifamba nemunzvimbo ine makomo isina kuenzana, achitarisira nekuvandudza chiratidzo chako mune akaomesesa mamiriro. Naizvozvo, nzira yedu yevanhurume yekumhanyisa magirazi ezuva zvakare akakodzera kune eamarathoni emhando yepamusoro uye nemakwikwi emakwikwi ehurefu echinhu chipi nechipi: chepakati, chakareba uye chakareba chakareba.
Uye zvakare, mazhinji edu maunganidzwa enzira yekumhanyisa magirazi evarume ane mukana wekuti iwe unogona kuchinjanisa lens maererano nemamiriro ekunze panguva yekushanya kwemakomo. Rudzi urwu rwevatariri vevarume vanomhanyisa magirazi ezuva, anowanikwa pane webhusaiti yedu zvichienderana nekuwanikwa kwechitoro chedu, inosanganisira CAT3 main lens. uye yechipiri yenguva dzeakaderera kuoneka CAT1. Aya malenzi anotendera nyore uye nekukurumidza lens shanduko mumasekondi mashoma, pakunakira kwega kwega nzira yemumhanyi.
Tora mukana wemienzaniso yedu yemagirazi emitambo anochinjika evarume
Mimwe miunganidzwa yedu yemagirazi emitambo evarume inosanganisira emhando dzinochinja, kune avo vatambi vanofanirwa kupfeka magirazi ekugadzirisa panguva yemitambo. Magirazi emitambo yemadhora evarume anowanikwa pane webhusaiti yedu akagadzirwa chaizvo kuti aenderane nemamiriro ezvinhu eziso angave nemhanyi, semuenzaniso, myopia kana hyperopia. Nekudaro, mamwe edu magirazi emitambo anounganidzwa, semuenzaniso, girazi remabhasikoro echirume evarume vanowanikwa pane webhusaiti yedu, vane clip yemukati inobvumidza kuiswa kwema lensi ekugadzirisa mune avo maforamu, akakodzera kune vamhanyi, vanoenda muchikepe, mabhasikoro nevatambi vekirasi yese izvo zvinoda kuti vapedze magirazi avo emitambo panguva yavo.
Izvo zvakakosha kuti upfeke magirazi emitambo evarume anokodzera ziso rako anoda nenzira kwayo. Magirazi ekunyorera emabhasikoro evarume uye kazhinji magirazi ekurapa anowanikwa pane webhusaiti yedu, anopa akawanda mabhenefiti. Muchokwadi, imwe yemabhenefiti ayo akakurisa, pamusoro pekukubatsira iwe kutarisa uye kuona zvakanaka kana iwe uchidzidzira zvemitambo, ndeyekuti iwe haugone kuwedzera iyo yakatovepo mamiriro eziso mumaziso ako.
Kana iwe ukatenga chero yemhando yedu yemishonga yemagirazi emitambo evarume muchitoro chedu chepamhepo, angave aya magirazi ekumhanya, kusvetuka, kutevedza kumhanya kana magirazi emigwagwa emabhasikoro evarume, unofanira kuenda nawo kuna chiremba wezvemaziso anovimbwa navo kuti vagone kugadzira malenzi akakodzera zvinoenderana neziso rako. Aya malenzi ndiwo iwo aunofanirwa kuisa mune furemu yako yemishonga magirazi emitambo evarume. Rangarira kuti edu ese mamodheru emishonga yekubhasikoro emabhasiketi evarume, uye ese edu anogadziridzwa mamodheru emitambo dzakasiyana anoenderana nekuwanikwa kwechitoro chedu.
MITAMBO MAGIRASI EVAKADZI
Makore edu anopfuura gumi nemashanu eruzivo mune zvemitambo chikamu akatibvumidza kuve neakawanda repertoire yemasikati magirazi emitambo evakadzi, akagadzirwa, pakati pemimwe mitambo yekunze, yebhasikoro, kumhanya, nzira yekumhanya uye kusvetuka., Maererano nezvakasiyana muunganidzwa uripo webhusaiti yedu. Nenzira iyi, isu tinopa dzakasiyana siyana sarudzo dzemadzimai emitambo magirazi mune akasiyana mavara, saizi uye maumbirwo, ayo akanyatsogadziriswa kune ako chaiwo emitambo zvido.
Muchokwadi, mafuremu edu akagadzirwa nezvinhu zvakaita seTr-90, iyo inopa kwakanyanya kuramba uye kunyaradza kune nyanzvi uye semi-nyanzvi vatambi vepamusoro kana avo vari musimba, vachivashandura - zvinoenderana nenyaya imwe neimwe - kuita kumhanya, kutsika uye kuteedzera goggles. kumhanya, kana premium yemhando yemigwagwa yemabhasiketi magirazi evakadzi. Uye kwete izvo chete, iwo akakodzerawo kuita kweakakwira kuchovha bhasikoro, MTB, uye mimwe mitambo yekunze senge yekumhanyisa mhepo kana kubhururuka kwechando uye zvimwe zvakawanda zvinoda kudzivirirwa pamwaranzi yezuva, chando, mvura, matavi, pasi, zvipembenene, nezvimwewo, uye zvakare izvo zvinoreva kudiwa kwekuve neakanakisa ekuona akasiyana uye akasiyana mavara mukati memitambo yekudzidzira. Uye zvakare, vachipiwa yavo ergonomics, uye dhizaini yavo, magirazi emadzimai emabhasikoro, uye kazhinji, edu ese mamodheru emadzimai emitambo magirazi, anopa makuru aerodynamics, sezvo iwo anokwana zvakakwana kumeso kwako kumeso, kufukidza nzvimbo dzese dzeparutivi.
Dzimwe nguva, kubata kwevamwe vakadzi magirazi emabhasikoro emigwagwa anowanikwa pamusika, uye kunyangwe mamwe emamodeli evakadzi anomhanyisa magirazi aunowana paInternet, ayo asiri emhando yepamusoro, anogona kukanganiswa nekudengenyeka. migwagwa, kana dzimwe nguva apo vatambi vanosvika kumhanya kumhanya vachiri kuita chero yemitambo iyi. Muchokwadi, vatambi vazhinji vanowanzo kuda iyi yakatarwa poindi kubva kumhando dzakasiyana, nekuti ivo havanzwe kuti zvavanoda zvakanyatso kuvharwa.
Neichi chikonzero, mu The Indian Face Isu takaisa chinangwa chekugadzira uye kugadzira magirazi emitambo akanakisa evakadzi, emabhasikoro, kumhanya, kutsika, nzira yekumhanya, uye mimwe mitambo yekunze, nechinangwa chekudzivirira kusagadzikana kwemagirazi pachiso chevakadzi, izvo zvinowanzo zvishoma nezvishoma paupamhi. Naizvozvo, edu mamodheru emadzimai emitambo magirazi akagadzirwa nematanho akakodzera uye mukana wakaringana wekusimbisa rutsigiro rwakakwana uye kugadzikana panguva yekufamba kwakawanda panguva yemitambo. Pamusoro peizvi, chimwe chinonakidza chemagirazi edu emabhasikoro emadzimai, uye magirazi edu egirazi emumugwagwa anomhanyisa vakadzi, ndeyekuti ivo vanofukidza zvakakwana kuchengetedza zvizere kumeso uye, pamusoro pezvose, maziso.
MAGIRASI ANOTARISIRA PANE ZVINODIWA ZVEVATAMBI
Munguva yakapfuura, zvigadzirwa zvemitambo zvaisatarisa vakadzi zvakanyanya sevatambi, uye havana kufunga kuti vaizoda michina yaive yakanakira ivo panguva yemitambo. Mazuva ano, zvisinei, zvinhu zvachinja zvakanyanya uye mu The Indian Face isu takabatanawo neiyi yakakosha maitiro. Ndokusaka mitambo yedu yemitambo yevasikana, kazhinji iine unisex dhizaini, inovhara izvo zvakakosha zvevakadzi vezvemitambo, pamwe nehunyanzvi hunodiwa kubazi revakadzi rezvikoro zvakasiyana zvemitambo. Pasina mubvunzo mu The Indian Face Isu tinotsigira nekusimudzira mitambo yemadzimai, ese epamusoro uye neanofarira. Kunyangwe mazhinji emadzimai edu emabhasikoro emaziso ekugadzira akaenzana zvakaenzana nevarume nekuda kwekugadzirwa kwavo kweunisex, ichokwadi kuti isu tinove nechokwadi chekuvhara zvido zvevakadzi kunyanya uye tinova nechokwadi chekuti vanoenderana zvakakwana kune zvavanoda, kupa zvevakadzi magirazi emitambo ane mhando yepamusoro uye kuita.
TINOSHANDISA DZINOGONESESA MAITIRO MUGirazi REDU REVAKADZI
Kuda chinzvimbo chinhu chinotizivisa, uye ndosaka tisingaregi kugadzirisa zvigadzirwa zvedu kuti tikwanise kupa magirazi emitambo akanakisa evakadzi pamusika. Naizvozvo, pamusoro pekuve neakanakisa timu yehunyanzvi, isu zvakare tine mukana wakakura wekuve nechikwata chevamhanyi vepamusoro, vanotitsigira nemhinduro yavo kuti vagadzirise magadzirirwo uye mashandiro emasikati emitambo evakadzi, mushure mekuzviedza. yavo mitambo yemitambo inoranga, uye vachitipa isu zvirevo uye mapoinzi ekuvandudza. Pakati pechikwata chedu chemitambo chevakadzi tinosimbisa vatambi vakaita saDesiré Villa, vafambi vakaita saLucía Martiño, vafambisi vemberi vemberi vakaita saBlanca Manchón, kana vanoenda pachando sevatsigiri vechikwata cheParalympic mukwikwidzi Astrid Fina.
Pamusoro pekudzivirirwa kubva kuzuva, zviitiko zvakaita sesinou, kutsvedza, kufamba munzira kana kuchovha bhasikoro zvakanyatsoenderana nesarudzo yemalensi ekurwisa-kuvhundutsa, nekuti iyi mitambo mikana yekutambura nemhedzisiro kubva kunze yakakwira. Pakati pe90% ne100% yematambudziko eziso anokonzerwa nekurohwa anogona kudzivirirwa nemhando yepamusoro magirazi emitambo evakadzi senge iwe aunowana pa www.theindianface.com. Nechikonzero ichi, zvese furemu uye lens yemagirazi emadzimai edu akagadzirwa nemidziyo isingagadzirike. Magirazi emitambo evakadzi anowanikwa pane webhusaiti yedu akagadzirirwa mumwe mutambo uye mamiriro emwenje, kuti tikwanise kutora matambiro edu kuenda padanho repamusoro chero nguva. Ichi ndicho chikonzero lens yega yega ichawedzera mamwe maratidziro uye kuenzana uye kudzora mamwe zvichienderana nemamiriro ezvakatipoteredza nemitambo.
Uye zvakare, mazhinji emamodeli edu emabhasikoro, kumhanya kana nzira inomhanya yevakadzi vane mukana wekuti malenzi avo anokwanisa kuchinjika. Aya mamodheru anosanganisira maviri akasiyana, lens yemazuva ane zuva CAT2., Uye imwe lenzi yemazuva emamiriro akashata CAT3. Naizvozvo, mapoka maviri aya anofukidza zvinoda kusvika zana muzana zvezvinodiwa nevatasvi vemabhasikoro, vamhanyi, vatambi vekumhanyisa ... Kunyangwe kune avo vatambi vanoda magirazi emishonga evakadzi, isu tinewo mamodheru anogadziriswa, nekuti anosanganisira furemu yemukati inobvumidza iwe kuisa malenzi ekugadzirisa, sekubvumidzwa, semuenzaniso, needu maunganidzwa eanogadziriswa magirazi emabhasikoro evakadzi. Funga nezvekuti zvese zvehunyanzvi zvinotsanangurwa nemagirazi edu emitambo evakadzi anowanikwa mune rondedzero yemhando yega yega. Saizvozvowo, kuunganidzwa kwemasikati magirazi emitambo anowanikwa pane webhusaiti yedu anoenderana nesitoko redu.
Ndezvipi zvinobatsira yemagirazi emitambo evakadzir?
Kufambira mberi mumunda wehunyanzvi kunoita kuti zvikwanise kupa zvigadzirwa senge magirazi ezvemitambo aine zvirinani zvirinani kurwisa mwaranzi yezuva. Paunodzidzira zviitiko zvemitambo, kunyanya kunze, nharaunda uye hunhu hwayo zvinosiyana kazhinji, uye zvakakosha kuti uve nemaonero akajeka nguva dzese. Hunhu hwevakadzi magirazi ezuva emitambo, senge iwo iwe aunowana pane webhusaiti yedu www.theindianface.com, farira kujekesa uku muchiono uye musiyano mukuru pane zvaunoona zvakakukomberedza. Iko kushandiswa kwerudzi urwu rwevakadzi magirazi emitambo kunokutendera iwe, pasina kupokana, kunakidzwa kukuru kwekuona kunyaradzwa kunofarira kunyaradzwa kwako iwe uchidzidzira. Isu tinokuyeuchidzai kuti magirazi emitambo evakadzi anofanirwa kuve ne100% ultraviolet mafirita. Kana vasina izvo, hapana mhando yekuvharika kwema UV UV uye kupinda kwechiedza chinokuvadza kubva kuzuva kwakwana; Kune izvi tinowedzera kuti, zvisinei nemusefa uye neruvara rwe lens, patinopfeka lenzi ine rima, mwana anowedzera nekuti anonzwa kuti mwenje waanogashira wadzikira, izvo zvinoshandura kuve pachena.
Ndeapi mapoka ealensi aripo, uye zvinokurudzirwa kuapfeka riini?
Chikamu 0 lenzi: Pfuura pakati pe80% ne100% yechiedza, chakagadzirirwa yekunze kana yakavharwa denga.
Chikamu 1 lenzi: Pakati pe43% ne80% yechiedza chinopinda. Iwo anowanzo ari yero kana orenji toni, uye yakagadzirirwa mwenje wakaderera kana mazuva ekupenga.
Chikamu 2 lenzi: Ivo vanosefa pakati pe18% uye 43% yechiedza, tinovawana mune yakawanda ski kana snowboard goggles.
Chikamu 3 lenzi: Inopfuura pakati pe9% ne18%, yechiedza, ndiyo inonyanya kushandiswa mumirazi yezuva yekushandisa kwakajairika
Chikamu 4 lenzi:Inosefa pakati pe3% ne8% yechiedza, zvinokurudzirwa mumitambo inoitika kubva pamamita mazana matatu ekukwirira.
Chinhu chakanakira kuve nemhando mbiri dzemalensi emagirazi emitambo evakadzi, rimwe remazuva ane zuva (CAT.3) uye rimwe remazuva ane mamiriro akashata (CAT.1).
Ko magirazi ezvemitambo evakadzi anosanganisira chii mukati The Indian Face?
Mhando dzedu dzemasikati magirazi emitambo evakadzi anosanganisira:
Zvimiro zvemagirazi evakadzi mabhasikoro. Ndezvipi zvakakodzera?
Magirazi emabhasikoro evakadzi chishandiso chakakosha kuonakuchengetedzwa kwemaziso edu nemaziso edu, pamusoro pekuwedzera uye nekuvandudza edu ekuona patinoita mutambo uyu. Naizvozvo, zvakakosha kuti upfeke magirazi emadzimai emabhasikoro emadzimai kana magirazi emadzimai emakomo emabhasikoro, zvichienderana nezviitiko zvese. Izvi zvinodzivirira mwaranzi yezuva kubva pakutipofomadza zvachose, inotidzivirira kubva kumhepo uye kuti inoomesa maziso edu, pamusoro pekudzikisa kukanganisa kunokonzerwa nekudzokedzana kwematombo mumugwagwa uye kudzivirira madhaka kubva pasi kupinda mukati medu, kana kuti zvipembenene zvakanangiswa kumeso edu, pakati pezvimwe zvakanaka zvakawanda zvekudzivirira kubva kumatenga; Magirazi emadzimai emabhasikoro echikadzi anoshanda semafafitera emota, asi mumaziso edu.
Kana tichisarudza furemu yemasikati emadzimai emabhasikoro, isu tinofanirwa kuziva kuti chengetedzo inouya pekutanga. Kana iwe uchidzidzira MTB, uko kusangana nemabump ane zvinomera, kukanganisa, madhaka uye kudedera kwakafara, unofanirwa kusarudza furemu isingagadzirike asi inochinjika, ine kukwana kwakaringana. Sarudza mamodheru emabhasiketi emabhasikoro evakadzi akagadzirwa nezvinhu zvakagadziriswa nerabha patembere uye nezambuko remhino, senge iwo aunowana mukati www.theindianface.com Izvi ndezvekuona kuti vanoramba vari muchinzvimbo mukufamba kwese. Iwo malenzi akagadzirwa ne polycarbonate, kuitira kuti vakwanise kumira pamabatiro edombo kana bazi panguva yekumhanyisa pasina kuisa maziso ako panjodzi, vane ergonomic dhizaini inogadzirisa kune iyo physiognomy yechiso chemunhu, ichipa nyaradzo, kufefetedza uye kudzivirirwa.
Ndezvipi zvakanakira kupfeka magirazi anomhanya evakadzi vanoita mutambo uyu?
Zvakakosha zvakanyanya kuti tidzivirire maziso edu kana tichizodzidzira kumhanya kana kufamba munzira. Kana tikadzidzira chero yemitambo iyi mambakwedza kana madekwana, mikana yekuti chiedza chezuva chichatirova chaiko mumaziso chinowedzera, pamwe nepakati pezuva apo zuva riri panhongonya yaro yepamusoro. Iwo maviri akanaka ekufamba-famba kwemasikati emadzimai, kana kumhanya magirazi ezuva kana chiri chako chakakosha, achakutora kubva padambudziko iri, uye nemhedzisiro yacho, senge nzendo uye kudonha izvo zvinogona kuitika kana paine mwenje wakawandisa munharaunda uye isu tinoita kusaona ivhu kana zvipingamupinyi zvatinga sangana nazvo. Ziva kuti kana tichimhanya panze isu tinogara tichionekwa nezvinhu zvinokuvadza zvinopinda mumaziso edu.
Imwe mukana wekupfeka magirazi emadzimai anomhanya ndeyekuti ivo vanoshanda sedziviriro yekudzivirira iyi mhando yechiitiko. Kune rimwe divi, kana tikamhanya munguva yechando kana chirimo, uko kunonaya mvura yakawanda, magirazi akanaka evakadzi anomhanya anogona kudzivirira manzwiro asingafadzi ekunzwa mvura ichirova maziso ako. Nekudaro, pasi peiyi kana mamwe mamiriro akashata, kana tikapfeka magirazi emhando yepamusoro evakadzi, tinomhanya nemeso edu akavhurika uye nekuwedzera kugona kwedu mumujaho. Kune rimwe divi, tinogona kusvika pakutakura kumanikidzwa kwemuviri wedu, izvo zvinotungamira mukukakavara mumapfudzi uye izvo zvinowedzera njodzi yekuti kukakavara uku kunoguma nekurwadziwa kwemhasuru. Naizvozvo, kupfeka magirazi evakadzi ekufamba-famba anokwanisa zvakare kubatsira kubatsira kugadzirisa uye kuzorora mamiriro edu tichimhanya.
Chii masports emitambozvinokurudzirwa vakadzi trail vanomhanya?
Iyo nzira yekumhanyisa magirazi evakadzi yatinokurudzira kuti zviitwe nemutambo uyu ndeaya anosanganisira chikamu chechitatu lensi dzemitambo, dzinobatsira kurwisa mwaranzi yezuva uye nekugadzira kuona kwakaringana. Kana iyo modhi iri lenzi inochinjika uye inosanganisira chikamu chepasi, senge CAT3. yemamiriro ezvinhu akashata, zvirinani. Kana iwe uri mumhanyi nguva dzose, uye uchiita marefu-marefu ekurovedza muviri, kuratidzwa kwako kune UV uye mwenje webhuruu kuchawedzera zvakanyanya. Ongororo ichangoburwa yesainzi inoratidza kusangana pakati pekupenya kwezuva uye macular degeneration, ndosaka vakadzi vako vanofamba vachiona magirazi ezuva achifanira kunge aine UV kudzivirirwa kwakakosha kumeso ako.
Isu tinopa zano vashandisi kuti vasarudze evakadzi vekutenderera (kana kumhanya) magirazi ezuva ane UV kudzivirira uye furemu isingaremi, yakaputirwa, inokwana zvakasimba kumeso kwako, uye haifambe kana uchimhanya. Vakadzi vanomhanyisa magirazi ezuva akagadzirwa ne TR-90 zvinhu isarudzo yakanaka. Iwe unogona zvakare kufunga nezvekupfeka mavara ane mavara. Kune mamwe ma shades anoshanda mushe zvichienderana nemamiriro ekunze auri kuzomhanya pasi pawo. Kana, pamusoro pezvo, iwe uchida magirazi emitambo ekunyora evakadzi, tinokuyeuchidza kuti pane webhusaiti yedu, zvinoenderana nekuwanikwa kwega kwega kuunganidzwa mudura redu, isu tine mamwe mamodheru ane furemu yemukati maunogona kuisa malenzi ekugadzirisa. Aya ekumisikidza magirazi ezuva akakodzera kune vese varume nevakadzi.